Sidee si ay u gudbiyaan Xogta laga One Phone in kale
Marka aad telefoon cusub, aad qabto in ay la kulmaan dhibaatada qodaxyo leh - sida loo xogta laga telefoonka jir wareejiyo mid cusub. Haddii labada telefoonada ordi OS la mid ah, sida Android, waxaad si fudud u wareejin karaan macluumaadka u dhexeeya laba telefoonada. Si kastaba ha ahaatee, wax noqday ka badan mareysa caawa marka ay labada telefoonada waa ka laba dhufto ee kala duwan, Android iyo macruufka tusaale ahaan. Waxaa jira qaar ka mid ah tahay xal lacag la'aan ah iyada oo internet ah, si kastaba ha ahaatee, waxay u soo baxday in ay aad u adag. Si aad telefoonka in xogta telefoonka kala iibsiga, waxaan jeclaan lahaa inaan ku talin ah qalab xisbiga saddexaad - ka Wondershare MobileTrans ama Wondershare MobileTrans u Mac . Waxaa loo arkaa qalab kala iibsiga phone hal-click, wareejinta music, sawiro, xiriirada iyo ka badan oo u dhexeeya telefoonada socda ee Android, macruufka iyo Symbian. Waxay u egtahay weyn, sax? Qaybta soo socda idin ​​tusiyo tallaabooyin faahfaahsan. Iska akhriso on.
Phone in Transfer Phone File 1 Click
In ka yar 10 daqiiqo, Dhamaan waxaa loo sameeyaa!
Ayaa qalab kala iibsiga phone gelineya inaad si ay u gudbiyaan music, video, sawiro fariimaha, qoraalka iyo xiriirada ka mid telefoonka gacanta in kale.
Zero Tayada Loss & Risk-free
Xiriirada Transfer, music, video, SMS, sawiro, jadwalka iyo ka mid phone in kale
Xogta u kala laba telefoonada wax socda ee Android, macruufka iyo Symbian si fudud
Shabakadaha taageerada kala duwan, sida AT & T, qaran, Versizon iyo T-mobile
Phone gurmad ah in ay computer ka iyo soo celin telefoon ka dib
Fiiro gaar ah: The version Mac ma taageeri Nokia (Symbian) telefoonka. Ma uusan aad ha gurmad iyo soo celinta xog telefoonka.
Maxaad Dooro Wondershare MobileTrans
Easy oo fudud in la isticmaalo
Ma noqon kartaa fududahay in xogta ka mid phone wareejiyo kale. Just 1 click, iyo wax kasta waxaa loo sameeyaa!
Ma aha oo kaliya Transfer Xiriir
Waxay ku siinaysaa fursad ah in ay u gudbiyaan xiriirada, music, sawiro, SMS, sawiro, jadwalka, iyo in ka badan ka phone inuu kuu waco.
Waxay si buuxda u taageersan telefoonada badan, sida Samsung, HTC, Sony, iDevice, Motorola, iyo in ka badan .
No arrinta haddii aad telefoonada waa shabakad ka mid ah shabakadaha ama kala duwan, waxay sameeyaan oo kaliya kala iibsiga aad loogu talagalay.
Faylasha ay taageerayaan
The faylasha loo gudbin karaa way kala duwan yihiin sida ay OS kala duwan ee telefoonada ah. Sidaa darteed, ka hor inta akhriska tutorial ah, waxaad ka hubin kartaa files taageeray hore.
The version Mac ma kuu ogolaaneyso in aad ay u guuraan files ama ka Nokia (Symbian) telefoonka.
Bedelka macruufka in Android
Android wareejiyo macruufka
Android wareejiyo Android
Nokia (Symbian) wareejiyo Android
Macruufka wareejiyo macruufka
Nokia (Symbian) wareejiyo macruufka
Android wareejiyo Nokia (Symbian)
IPhone wareejiyo Nokia (Symbian)
Nokia wareejiyo Nokia (Symbian)
Sidee si ay u gudbiyaan Faylal ay ka Phone in Phone
Waxyaabaha ay tahay inaad ogaatid
1. Ku rakib Lugood, Si files wareejiyo ama ka iPhone, iPad ama iPod taabashada ah, waxaad u baahan tahay si loo soo dajiyo Lugood on your computer. 2. Xiriirada Transfer ee xisaabaha: Si aad u gudbiyaan xiriirada in iCloud, Google, Yahoo !, Hotmail iyo xisaab kale, waxaa idinku waajib ah inuu saxiixo in xisaab-aad isha telefoonka ugu horeysay.
Tallaabada 1. Run Tani Tool
Ka dib markii la rakibey, way kuu soo ordi kartaa qalab kala iibsiga phone kombiyuutarka. In qaybihiisa, dooran Phone in Transfer Phone oo guji Start .
Tallaabada 2. Connect Laba Phones in Computer ah
Connect labada telefoonada in kombiyuutarka la fiilooyinka USB. Ayaa qalab kala iibsiga phone Aqoonsanaysaan, mar. Markaas, sida aad ku aragto shaashadda ah, labada telefoonada waxaa lagu muujiyey in taleefanka si uu suuqa kala iibsiga telefoonka.
Tallaabada 3. Transfer Music, Video, SMS, Photos, Xiriirada iyo More ka Phone in Phone
By default, dhammaan faylasha taageeray ayaa la hubinayaa. Sidaas darteed, soo saarto aad file rabin marka aad rabto in lagu wareejiyo qaar iyaga ka mid ah. Markaas, bilowdo kala iibsiga faylka adigoo gujinaya Start Copy . Laga soo bilaabo wada hadal pop-up ka, waxaad eegi kartaa boqolkiiba kala iibsiga. Ugu dambeyntii, riix OK si loo dhamaystiro iibsiga.
Nuqul Faylal ay ka Nokia in Android
Ka iPhone Demi Faylal ay si Android
Data ka dhaqaaq iPhone si iPhone
Faylal ay kala soo wareegeen iPod in iPod
Xiriirada Transfer in a New Android Phone
Faylal ay ka dhaqaaq Android inay Android
Bedelka Contents ka iPad in Samsung
Nuqul Faylal ay ka Motorola si iPhone
Demi Faylal ay ka Nokia in Sony
Data ka dhaqaaq iPhone in Samsung
Faylal ay ka HTC Bedelka in Samsung
Bedelka Xiriirada ka Android inay Nokia 1 Click
Sidee si ay u gudbiyaan Xiriirada, SMS, Music iyo More ka Samsung si iPhone
Xogta laga iPhone wareejiyo HTC Mid ka mid ah M8 / One X / doonayay oo / ugaar
3 Easy Siyaabaha Bedelka Xiriirada ka iPhone in Android Phones
Sidee si ay u gudbiyaan Photos ka Phone si aad Computer
Transfer Xiriirada ka Nokia in Nexus 5 Si fudud
Sida loo saar Barnaamijyada xawaaladaha ee Windows
Dib eBooks in Lugood iyo dar eBooks qalabka macruufka
> Resource > Transfer > Sida loo kala iibsiga xogta ka Mid Phone in kale